I-DOMINICAN REPUBLIC - Ngokomlando, izinqubo zezimayini ezinamazinga wokuthola kabusha angahle ziholele ekuhlanganisweni kwenani elikhulu lezinto ezingatholwa. Ukukhishwa kwalolu daba kungatholakala kusetshenziswa ama-dredges.
Kunezici eziningana ezithi kufanelekile ukukhishwa nokuhlelwa kabusha kokuhlelwa kwama-tiles:
Umsila udinga izinsiza ezimbalwa uma kuqhathaniswa nezimayini ezivamile. Isibonelo, i-dredge can - ngesinyathelo esisodwa - ikhiphe futhi ihambise leyo nto esikhungweni sokucubungula esisendaweni engamakhilomitha ayishumi nanye kude. Lokhu kunciphisa izindleko ezihlobene nemishini yokusebenza, abasebenzi, uphethiloli kanye nokugcinwa.
Inqubekela phambili kubuchwepheshe obusebenza kabusha
Ukucutshungulwa komsila kuvumela ukukhiqizwa okwengeziwe ngaphandle kokukhulisa unyawo lwemayini futhi ngaphandle kokudinga izimvume ezingeziwe zomhlaba.
ILas Lagunas, Idamu Lomsila lePueblo Viejo
Le phrojekthi itholakala eDominican Republic, 105km enyakatho yeSanto Domingo. Umnikazi wephrojekthi yiPanterra Gold / Envirogold yase-Australia. Izinsimbi zegolide nezesilivere zenziwa ngemisebenzi eyejwayelekile yezimayini phakathi konyaka we-1992 nowe-1999. Imali yokuqala eyatholakala emayini yayingeyinhle (<30%) futhi inani elikhulu le-ore lafakwa edamini. Idamu linezinkulungwane zamarandi alinganiselwa ezigidini ezingama-5,137 zamathani, libala u-3.8 g / t wegolide no-38.6 g / t wesiliva.
Ngo-2012, u-Envirogold wayithenga I-Ellicott 370 Dragon® ukwehla ukuze kukhishwe umsila edamu bese uwupompa kwisitshalo sawo sokulungisa.
I-dredge yayisetshenziselwa ukukhipha impahla ekujuleni okufika ku-8m bese iyipompa njenge-slurry ibanga phakathi kwe-500m ne-800m nokuphakama kwesiginali kwe-11m. I-slurry ipayipi kusetshenziswa ipayipi le-10-inch HDPE. I-dredge ikhiqiza futhi ipampu i-slurry nge-28% kwabantu. Ama-tatings anokuqukethwe okucacisiwe kwe-Gravity ye-2.69 nobuningi bamanzi be-1.71t / m3.
Ukuze ukhuphule umthamo wokukhiqiza futhi unikeze ukuguquguquka okuthe xaxa ekusebenzeni, u-Envirogold uthenge owesibili I-370 dredge kusuka ku-Ellicott® e 2013.
Ama-dredges njengamanje asebenza ukuhlinzeka nge-24 ngehora ngosuku kokuphakelwa kwezitshalo, ukushintshanisa amadokhumenti ukufeza umkhiqizo, ngabasebenzi bomunye (1) opharetha ngamunye kanye nabasizi ababili (2) ngokushintshana ngakunye.
Ukuze ulawule kangcono izinto ezibonakalayo namanzi kusukela ekusebenzeni kokukhipha, idamu lihlukaniswe izigaba ezincane ezincane ezaziwa njengokuphatha amachibi. Lapho isigaba sedamu seliphinde sakhiwa, i-void eyenzelwe ukusetshenziswa isetshenziswa kabusha emthini, ngakho-ke kulondolozwa indawo yedamu. Umsebenzi we-dredge usebenzisa amanzi akhona edamini. Amanzi acitshwayo aqala ukujikelezwa abuyele echibini lokudonsela amanzi ngakho-ke awekho amanzi awengeziwe.
Ezinyangeni ezintathu zokuqala ze-2013, i-dredge yokuqala ikhishwe futhi yaphonsa cishe i-80,000 m3 yezokusikwa esitishini esisebenzayo.
I-Ellicott Series 370 dredge ejwayelekile yidizili enika amandla ukusika dredge ngepampu ye-12 ″ x10 and kanye ne-440 HP yamandla afakiwe esewonke. Kuyinto enamandla kakhulu, ethembekile futhi ephathekayo ye-dredge ekahle yalolu hlobo lohlelo lokusebenza. Iyunithi yokuqala yanikezwa umsiki ojwayelekile, kuyilapho eyesibili yayihlanganisa nokusika amabhakede.
Ngenkontileka ekhethekile yokusebenza, ochwepheshe bakwa-Ellicott Field Service basebenzise ama-dredges okwesikhathi sezinyanga ze-3 e-2014. Le nsizakalo ivumele iklayenti ukuthi likhulise ukukhiqizwa kwama-dredges futhi liqeqeshe abasebenza kulo ezindleleni ezinhle kakhulu zokudonsa amanzi.
Amakhethini ezimakethe nawobuchwepheshe enza ukuthi ukuhlelwa kabusha kwama-taings kube futhi kukhange ngokwengeziwe. Ngenxa yomthamo wayo wokukhipha ngokuthembekile inani elikhulu lezinto ezibonakalayo futhi uzihambise ngaphandle kwesidingo sokuphatha kabili, i-dredge i-workhorse efanelekile kulawa maprojekthi. Ngaphezulu kweminyaka engu-125 yamava wokuqamba nokukhiqiza ikhwalithi ephezulu kakhulu, ama-dredges anamandla kakhulu futhi athembekile, i-Ellicott Dredges yisisombululo esifanele!
Qala Iphrojekthi Yakho Yokukhipha imisila nge-Ellicott